Iza no namotika ny fandriampahalemana sy ny hafaliana krismasy tao Hong Kong? · Global Voices teny Malagasy
Famoriam-bahoaka nokinasa ho amin'ny andro voalohany amin'ny taona 2020
Voadika ny 01 Janoary 2020 12:37 GMT
“Aoka ho rano miantsena” ao amin'ny tsenambarotra ao amin'ny distrikan'i Shatin. Avy amin'i 朝雲. Saripika nampiasaina araka ny fifanarahana ara-botoaty nifanaovana tamin'i Stand News.
Sady tsy nilamina no tsy nahafaly ny krismasy tao Hong Kong raha miezaka mandeha amin'ireo distrika lehibe fiantsenana ny polisy misahana ny rotaka mitondra fitaovam-piadiana enti-miady amin'ny rotaka hanaparitahana ireo fihetsiketsehana tselatra. Hatramin'ny 28 Desambra teo, tamin'ny 336 ny isan'ny olona nosamborina.
Noho ny nataon'ny polisy, dia manana ny endrika amin'ny antsoina hoe ‘Krismasy fotsy’ i Hong Kong:
Vinanio anie: Manana ny antsoina hoe fetin'ny krismasy fotsy isika eto HK. Etona mandatsa-dranomaso, eo anoloan'ny Hotel iray. Manantena aho fa tsy hamadika ny fetin'ny krismasy ho ra mandriaka ny polisy.
‘Aoka ho rano miantsena’ sy fahavoazana eo amin'ny roa tonta
Mialoha ny krismasy, niantso ny hanaovana andian'hetsika tselatra antsoina hoe “Miantsena miaraka aminao” na “Aoka ho rano miantsena” (和理 tranombarotra) amin'ny sehatra media sosialy isankarazany ny mpanao fihetsiketsehana. Efa nisy hetsika mitovy amin'izany ihany koa volana vitsivitsy izay nitranga tamin'ireo fotoana nisian'ny fety tahaka ny Halloween ohatra.
Ny “aoka ho rano miantsena” dia midika hoe mandehandeha mitety ireo tsenambarotra sy distrika fiantsenana, mihira hiram-panoherana sy mihiaka teny filamatra. Misy ireo mpanao fihetsiketsehana mihevitra fa paikadim-panoherana voaaro kokoa io – raha miditra amin'ireo tsenambarotra ny polisy misahana ny rotaka dia hiteraka fahavoazana mihatra amin'ireo fihariam-piantsenana andro fety izany, ary heverin-dry zareo fa hanimba ny toekarena izany ka voatery izy ireo hanery ny governemanta sy ny mpanohana ny fitondrana hanohana ny fanadihadiana mahaleotena amin'ny ferisetran'ny polisy amin'ireo fanaparitahana mahery vaika ny fihetsiketsehana hatramin'ny jona 2019.
Milamina ny ankamaroan'ireo ‘mpiantsena’ fa any amin'ireo distrika maro, misy ireo tranombarotra pro-Beijing vakian'olona misarontava ny varavarankelin'ny fivarotany. Raha tokony hanao ho lasibatra ireo mpanao fihetsiketsehana maherisetra ny polisy, dia ireo andian'olona manao hetsika tselatra manaja filaminana no ampiharan'ny polisy fifehezana fitaovam-piadiana ahitana etona mandatsa-dranomaso, tsifitra sakay, bala fingotra, tifitra rano an-tafondro ary kibay:
Krismasy eto Hong Kong, 2019
Iza no nandrava ny krismasy?
Vavolombelona nanatrimaso ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana tany amin'ireo distrika fiantsenana nandritra ny fetin'ny krismasy ny mpikambana sasany ao amin'ny Hong Kong Watch, vondrona iray mpandala ny zon'olombelona miorina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra. Namoaka fanambaràna ny vondrona hanamelohana ny herisetran'ny polisin'i Hong Kong:
Fianahan'ny tatitra fisian'ny daroka, fitifirana amin'ny bala fingotra ary amin'ny loha sy ny endriky ny olona (fanitsakitsahana ankarihary ny fenitra iraisampirenena), ny fampiasana tsy ankanavaka etona mandatsa-dranomaso, tifitra rano an-tafondro amin'ireo vahoaka milamina mankalaza krismasy eo Tsim Sha Tsui sy ireo faritra hafa no mampiseho ny halalin'ny krizin'ny zon'olombelona ao Hong Kong.
Etsy ankilan'izany indray ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ny tanàna Carrie Lam, miampanga ny mpanao fihetsiketsehana ho mandrava krismasy. Mandritra izany fotoana izany ny mpitondratenin'ny polisy mamariparitra ny mpanao fihetsiketsehana ho andian-jiolahy mampihorohoro ny vahoakan'i Hong Kong izay manana fijery ara-politika isan-karazany. Mandrisika ny tompon'ny fivarotana izy hiaraka hiasa amin'ny hetsiky ny polisy.
Na izany aza, iza moa no mitovitovy kokoa amin'ny jiolahimboto? Namoaka sarin'ireo polisy manao fanamiana sivily amin'ny iray amin'ireo tsenambarotra fiantsenana ny mpanoratra Richard Scotford:
Indreo ny andian-jiolahimboto manao akanjo mainty nandrava ny krismasin'ny rehetra.
Ary maro amin'ireo mpiserasera no nampitaha ireo polisy manao fanamiana sivily misarontava mba tsy ho fantatr'endrika amin'ny mpampihorohoro:
Tsy hitako izay fahasamihafana
Tsy misy famotorana mahaleotena amin'ny herisetran'ny polisy
Tany alohaloha tany kokoa tamin'io volana desambra io, niala tamin'ny asany ireo manampahaizana manokana iraisampirenena nampiasain'ny governemantan'i Hong Kong hanolo-kevitra ny fanarahamason'ny polisy amin'ny hiatrehana ireo fitarainana amin'ny fihoaram-pefy ataon'ny polisy noho ny fandresen-dry zareo lahatra fa tsy ampy fitaovana ahafahana manao fanadihadiana araka ny tokony ho izy ny fomba fiasa amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny fetin'ny krismasy, namoaka tatitra fanadihadiana ny Washington Post nanatsonga ny tenin'ireo manampahaizana manokana nijery ireo taridalana sy boky kely fianaran'ny polisin'i Hong Kong ofisialy ary nanoratra fehiny fa tsy miraharaha ny arofenitra azy manokana ny polisin'ny tanàna ankilan'ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ireo kasinga ara-shimika sy fampiasana hery diso tafahoatra amin'ny mpanao fihetsiketsehana milamina.
Hatramin'ny jona 2019, mihoatra ny 6300 ny mpanao fihetsiketsehana nosamborina fa hatramin'izao tsy misy na dia polisy iray aza voasazy noho ny fampiasan-kery diso tafahoatra izay nitarika faharatrana lalina amin'ny mpikatroka, mpanora-gazety ary ireo mpamonjy olona maratra.
Tondroin'ny tatitra teo aloha nandritra ny volana vitsivitsy izay ny fisamborana avy amin'ny tondromolotra ataon'ny polisy sy ny fampijaliana ireo olona hazonina. Fanampin'izany, mbola mandeha ny siosion-dresakafa misy amin'ireo mpanao fihetsiketszehana eny amin'ny lohalaharana no darohana mandramaty ary amboamboarin'ny polisy no namono tena avy eo. Tanelanelan'ny volana jona ka hatramin'ny septambra, 256 ny isan'ny trangam-pamonoan-tena ary 2.537 ny trangam-pahafatesana ivelan'ny hopitaly. Ireo tarehimarika ireo dia mihoatra 15 sy 14 isanjato noho izay nitranga tamin'ireo fotoana irreo ihany tamin'ny taona 2018.
Raha mbola maniratsira ny fiampangana ho tsaho ny manampahefana amin'ny governemanta, ny tsi-fanekeny hanaovana fanadihadiana mahaleo tena amin'ny herisetran'ny polisy no manimba ny fitokisana azy. Mbola manohy ihany koa ny governemanta amin'ny famoahana dokambarotra ara-politika mandrisika ireo olom-pirenena manokana ny demaokrasia hiampanga ireo lazaina ho hetsika mandrava sy maherisetra ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Saingy diso toerana ara-maoraly ny antso tahaka izany noho ny tsy tsi-fisian'ny fanadihadiana mahaleotena amin'ny fanararaotam-pahefana ataon'ny polisy.
Mandritra izany fotoana izany, nahatratra ny toekarena ao an-toerana ny famoretana maherisetra atao amin'ireo mpanao fihetsikettsehana. Nihena hatramin'ny 53 isanjato ny isan'ny mpizahatany ao Hong Kong nandritra ny vanim-potoanan'ny krismasy.
Tahaka ny tsy hiverina amin'ny laoniny i Hong Kong amin'ny taona 2020 raha mbola manohy amin'ny tsi-firaharahiana amin'ny fitakiana lehibe dimy tadiavin'ny mpanao fihetsiketsehana. Efa miomana amin'ny fihaonambe fanaony isa-taona amin'ny andro voalohany amin'ny taona 2020 ny Fiarahamientan'ny vondrona sivika mpandala ny zon'olombelona ary ny lohavolana tokana amin'izany dia ny fanitrikitrihana ny fitakian'ny hetsi-panoherana: Fanesorana ny volavolan-dalànan'ny fampodiana any Shina (efa nesorina tamin'ny faha-23 amin'ny volana Oktobra), hanesorana ny marika rotaka amin'ny mpanao fihetsiketsehana, famotorana mahaleotena amin'ny herisetran'ny polisy, famotsoran-keloka ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina, ary ny fahafahan'ny rehetra mifidy:
Hanatontosa famoriam-bahoaka isika amin'ny 1 janoary 2020, ka ny lohahevitra amin'izany dia hoe “Tsarovy ny fampanantenantsika, hijoro toy ny iray isika”. Miandry taratasin-tsy fisiam-panakanana